Hub badan oo lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Xudur – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Hub badan oo lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Xudur
Wararka naga soo gaaraya degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in halkaasi ay kulan albaabada u xiran ku yeesheen saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan degmadaas.
Kulankaasi ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid ay saraakiisha Itoobiya hub ku siinayeen ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, si ay ula dagaalamaan dagaalyahanadda Al-shabaab ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaas.
Hubka la siiyay ciidanka Koonfur Galbeed oo isugu jira kuwa culus iyo fudud ayaa waxaa la qorsheeynayaa inay dagaal kula galaan dagaalyahanada Al-shabaab oo gacanta ku haaya deegaanada gobolka Bakool.
Arrintaan ayaa la sheegayaa inay Itoobiya uga dan-leedahay, inay si buuxdo u faarujiso goobaha ay haatan kaga sugan yihiin gobolka Bakool, inkastoo aan la ogeyn xilliga rasmiga ah oo ay goobahaasi isaga bixi doonaan.
Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isaga ka baxaayay goobo badan oo ka tirsan gobolka Bakool, waxaana goobahaas markii dambe gacan ku hayntooda la wareegay dagaalyahanadda Al-shabaab oo haatan goobahaasi ka dhistay aagag dagaal.